Madheshvani : The voice of Madhesh - घर जोकोहीले बनाउन सक्ला तर चलचित्र बनाउन सक्दैन : स्वेता खड्का
घर जोकोहीले बनाउन सक्ला तर चलचित्र बनाउन सक्दैन : स्वेता खड्का
फागुन ४, २०७४
अभिनेत्री स्वेता खड्का पछिल्लो समय चर्चामा छिन् । शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउने चलचित्र ‘कान्छी’को कारणले उनको चर्चा चुलिएको हो । ‘कान्छी’ उनको निर्माण अभिनय रहेको चलचित्र हो । यसअघि दुई सफल चलचित्र ‘कहाँ भेटिएला’ र ‘कोहीनूर’ अभिनय गरेकी स्वेताको यो निर्माणमा डेब्यु चलचित्र हो । उनले अभिनयको अलवपा व्यावसायिक रूपमा अगाडि आउन चलचित्र निर्माणमा हात बढाएकी हुन् । अभिनय र निर्माणमा दुवै अनुभव सँगालेकी स्वेता निर्माण कठिन विषय भएको बताउँछिन् । चलचित्र अभिनय र निर्माणको अलवा समाजसेवामा समेत सक्रिय अभिनेत्री स्वेतासँग गरिएको छोटो कुराकानी ।
तपाईंको निर्माण अभिनय रहेको चलचित्र ‘कान्छी’ भोलि शुक्रबारबाट रिलिजमा आउँदैछ । प्रचार प्रसार कस्तो भइरहेको छ ?
– प्रचार प्रसारका लागि हाम्रो टिमले केही कसुर बाँकी राखेको छैन । हामीले सक्दो कोसिस गरेका छौँ । दर्शकलाई थाहा नभएको केही पनि छैन । जहाँ पनि म जान्छु, सबैलाई कान्छीको बारेमा थाहा भएको पाएकी छु । हामीले सार्वजनिक गरेको चलचित्रको गीतले दुई महिनामै एक करोड दर्शक पाएको छ । यो प्रचारले नै सम्भव भएको हो ।
प्रदर्शनको दिन नजिकिदै गर्दा ढुकढुकी पनि बढेको होला हैन ?
–व्यवसायको कुराले केही ढुकढुकी पनि बढेको छ । अचेल सुत्दा सपना पनि ‘कान्छी’कै देख्छु ।
निर्माताका रूपमा भन्नुपर्दा कस्तो बनेको छ कान्छी ?
हाम्रो टिमको कोसिस पनि चलचित्र राम्रो बनाउने नै हो । कान्छी एकदमै राम्रो बनेको छ । त्यसैले पनि होला दर्शक चलचित्र हेर्न आतुर देखिन्छन् । विदेशबाट पनि ओभरसिज राइटका लागि धेरै फोनहरू आएका छन् ।
त्यसो भए ‘कान्छी’को व्यवसाय हुनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?
– हो, चलचित्र रिलिजको मिति नजिकिँदै गर्दा म निकै उत्साहित छु । दर्शक चलचित्र हेर्न आतुर देखिएका छन् । यो नै सफलताको सुरुवात हो ।
के हो चलचित्र ‘कान्छी’ ?
– कान्छी भन्ने बित्तिकै गाउँमा एउटी छोरी, बहिनीलाई मायाले बोलाउने नाम भन्ने बुझिन्छ । गाउँकै कथामा बनेको छोरी पात्रमा आधारित चलचित्र हो कान्छी पनि । सबैले माया गर्ने त्यही कान्छी हामीले बनाएका छौँ ।
निर्माण कतिको सहज रहेछ ?
– मेरो निर्माणले मात्र सम्भव भएको होइन । यसमा पूरै टिमवर्कको हात छ । मिहिनेती, लगनशील र अनुभवी प्राविधिक टिम र कलाकारको सामूहिक प्रयास हो– कान्छी । यो चलचित्र निर्माणमा मैले धेरै इन्ज्योए गरँे । यसबाट म राम्रो निर्माता भनेर चिनिनेछु । कथाले मागेको कुरा मैले निर्माताको रूपमा पुर्याएको छु । चलचित्र निर्माण गर्ने व्यक्तिका लागि यो सानोतिनो कुरो होइन । घर जो केहीले पनि बनाउन सक्ला । तर चलचित्र बनाउन सक्दैन ।
अभिनय र निर्माणमध्ये कुन विधा सजिलो रहेछ ?
– तुलना गर्ने हो भने निर्माणभन्दा अभिनय सजिलो छ । किनभने अभिनयमा त्यस्तो पे्रसर हुँदैन । कसरी आफ्नो अभिनय उत्कृष्ट बनाउने भन्ने कुरातिर मात्र ध्यान दिए पुग्छ । निर्माणमा धेरै विचार गर्नुपर्छ । चलचित्रको होलटिमदेखि अन्य सबै म्यानेजमेन्ट निर्माताले हेर्नुपर्छ । यो सहज कुरो होइन रहेछ ।
त्यसो भए चलचित्र चलाउन सहज छ ?
– यो त झन् सबैभन्दा गाह्रो विषय रहेछ । सबै निर्माताले चलचित्र बनाउनभन्दा चलाउन गाह्रो छ, किनभने यो बल्ल मैले बल्ल बुझ्दैछु । एउटा कुरो के हो भने राम्रो चलचित्र बनायो भने धेरैको सपोर्ट हुँदो रहेछ । अहिले धेरै चलचित्र बनिरहेका छन् । आफ्नो चलचित्र कसरी एकल प्रदर्शन ल्याउने भन्ने मिलाउन गाह्रो रहेछ । यो मामलामा मेरो चलचित्र एक्लै आउँदैछ । आफूलाई लक्की मान्छु ।
दर्शकमा राम्रो क्रेज भएका हिरो अनमोलको चलचित्र अघिल्लो साता आएको छ । यसले केही असर गर्छ कि ?
–यो चलचित्रको प्रदर्शनले मलाई केही फरक पर्दैन । किनभने दर्शक ‘कान्छी’को प्रतीक्षामा छन् । चलचित्रको विषयमा आएका समाचारमा दर्शकले दिएको प्रतिक्रियाले यो देखाएको छ । दर्शकले चलचित्र नजुधाउनु हामी कान्छी हेर्न चाहन्छौँ भनेर भनेकाले पनि एक साता सारेर एकल प्रदर्शन मिलाइएको हो ।
अभिनय, निर्माण, व्यवसाय र समाजसेवा चौतर्फी हात फिजाउँदा सफलता सम्भव छ ?
–निर्माणका लागि अहिले व्यवसायलाई साइडमा राखेकी छु । व्यवसायको मिटिङसमेत छोडेर चलचित्र कर्ममा लागि परेकी छु । समाजसेवामा पनि एकै चोटी हात हालेकाले केही गाह्रो महसुस भएको छ । समाज सेवाको कुरा गर्ने हो भने माझी बस्ती निर्माण गरिरहेका छौँ । यो सबैको सहयोगले सम्भव हुँदैछ । माझी बस्ती निर्माण लागि सबैले सहयोग गर्नुभएको छ । अझ केही सहयोगको आवश्यकता छ ।
आगामी दिनमा केलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ ?
–निर्माणका रूपमा आउँछु नै । अभिनय दर्शकको हातमा छोडिदिएको छुु । बिजनेस आफ्नै गतिमा चलिरहेको छ । समाज सेवामा राम्रो राम्रो काम गर्दै जानेछु । मेरो अपिलले कसैले साथ पाउँछ । उसको भविष्य बन्छ भने त्यो काममा हरदम तयार छु ।
‘कान्छी’ चलचित्रका बलिया तीन पक्ष ?
– मलाई दुःखबाट उतार्ने दर्शकले धेरै प्रतीक्षा गरेको चलचित्र हो– कान्छी । – यो निर्माणका हिसाबले पनि धेरै राम्रो बनेको छ । यसको सङ्गीत पक्ष पनि धेरै राम्रो छ ।
– नेपाली पन भएको सबै फ्यामिलीले एकसाथ बसेर हेर्न मिल्ने चलचित्र हो– कान्छी । दर्शकले रुचाएका कलाकारहरूले भरिएको र दर्शकको कारणले बनेको चलचित्र पनि हो ।
केही मिडियामा विवाह गर्दै स्वेता भन्ने समाचार आएको थियो नि ?
– जन्म, मृत्यु र विवाह कुनै पनि मानिसको बसमा छैन । यो माथिबाट फिक्स भएर आएको हुन्छ रे । त्यो लेखेकै होला मेरो श्रीजीसँग विवाह भयो । त्यो लेखेकै होला । अहिले बिछोड भयो । त्यसैले म वर्तमानलाई मात्र विश्वास गर्छु । भविष्य के हुन्छ, त्यो देखेकी छैन । त्यसको चिन्ता पनि लाग्दैन ।
माझी बस्ती निर्माण अहिले रोकिएको हो ?
– होइन, होइन । अहिले डीपीसी लेभल सकिएको छ । तपाईंहरूले बस्ती निर्माण स्थल गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ । जति काम हुनपर्ने हो, त्यो भएको छैन । केही ढिलाइ भने पक्कै भएको हो । चुनाव, पुनः निर्माण प्राधिकरणको सीईओ फेरिनु यसको कारण हो । यसमा स्वेताश्री फाउन्डसनको केही गल्ती छैन । अहिले काम रफ्तारमा भइरहेको छ । यो बस्ती निर्माणमा अझै केही रकम अपुग छ । म आफूले सक्दो सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गर्छु ।
दर्शकलाई केही भन्नुहुन्छ कि ?
– दर्शकले मलाई अहिले जसरी माया दिनुभएको छ । मेरो चलचित्र ‘कान्छी’लाई पनि माया दिनू । मेरो अभिनय, निर्माण राम्रो नराम्रो के छ, प्रतिक्रिया दिनुस् भन्न चाहन्छु ।